ဉာဏ်ကောင်းသော စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > multi အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ဉာဏ်ကောင်းသော စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator
AOX-M စီးရီးအသိဉာဏ်မော်တော်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator များအတွက် 1. လက်စွဲစာအုပ်စစ်ဆင်ရေး
AOX-M စီးရီး၏ installation အနားကွပ်အသိဉာဏ်မော်တော်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator မာခ် ISO5210 သို့မဟုတ် DIN3210 စံနှင့်ညီသည်။ အဆို့ရှင်၏အမျိုးမျိုးများအတွက်သင့်လျော်သောရွေးချယ်ဖို့ output ကို drive ကိုအမျိုးအစားအမျိုးမျိုး။
တစ်ချိန်တည်းမှာကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုသေချာခုနှစ်, ငါတို့သည်လည်းထိန်းချုပ်များ၏အသေးစိတ်ကို, အထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးဖို့အာရုံစိုက်, ချောထုပ်ပိုးထိရောက်စွာ AOX-M စီးရီးအသိဉာဏ်မော်တော်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator ၏အသွင်အပြင်ကိုသေချာနှင့်ဖောက်သည်ကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံကိုပေးနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီနည်းပညာသုတေသနနှင့်အသစ်သော AOX-M စီးရီးအသိဉာဏ်မော်တော်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နည်းပညာကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရန်ပုံငွေပမာဏကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။3တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်, 27 utility ကိုမော်ဒယ်မူပိုင်ခွင့်, 49 ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်များနှင့်4တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်အပါအဝင်စုစုပေါင်း 89 မူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။2utility ကိုမော်ဒယ်မူပိုင်ခွင့်။
Q: မဆိုအသိအမှတ်ပြုသွင်းကုန်၏မရှိဘဲ AOX-M စီးရီးအသိဉာဏ်မော်တော်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator အမိန့်ပေးနိုင်သနည်း
Q: AOX-M စီးရီးသင့်ရဲ့စျေးနှုန်းအသိဉာဏ်မော်တော်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator ကော?
hot Tags:: ဉာဏ်ကောင်းသော စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်